bhikkhuni – Dhammadīpa
Posted on 15 Jul 2017 by Ashin Sopāka
“So this holy life, bhikkhus, does not have gain, honour, and renown for its benefit, or the attainment of virtue for its benefit, or the attainment of concentration for its benefit, or knowledge and vision for its benefit. But it is this unshakeable deliverance of mind that is the goal of this holy life, its heartwood, and its end.” – MN 29
“Iti kho, bhikkhave, nayidaṁ brahmacariyaṁ lābhasakkā­ra­silo­kā­nisaṁ­saṁ, na sīla­sampa­dā­nisaṁ­saṁ, na samā­dhi­sampa­dā­nisaṁ­saṁ, na ­ñāṇadas­sanā­nisaṁ­saṁ. Yā ca kho ayaṁ, bhikkhave, akuppā cetovimutti—etadatthamidaṁ, bhikkhave, brahmacariyaṁ, etaṁ sāraṁ etaṁ pariyosānan”ti.
“ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ဤသာသနာတော်သည် လာဘ်သပ်ပကာ အကျော်အစောဟူသော အကျိုး ရှိမှုအတွက် မဟုတ်ပေ၊ အကျင့်သီလပြည့်စုံခြင်း ဟူသော အကျိုးရှိမှုအတွက် မဟုတ်ပေ၊ တည်ကြည်ခြင်းသမာဓိဟူသော အကျိုးရှိမှုအတွက် မဟုတ်ပေ၊ (ဒိဗ္ဗစက္ခု) ဉာဏ်အမြင်ဟူသော အကျိုးရှိမှုအတွက်မဟုတ်ပေ။ ရဟန်းတို့ အကြင်မပျက်စီးနိုင်သော စိတ်လွတ်မြောက်မှု (အရဟတ္တဖိုလ်) သည် ရှိ၏၊ ဤသာသနာတော်သည် ဤမပျက်စီးနိုင်သော စိတ်လွတ်မြောက်မှု (အရဟတ္တဖိုလ်) အတွက်သာ ဖြစ်၏။ ဤမပျက်စီးနိုင်သော စိတ်လွတ်မြောက်မှု (အရဟတ္တဖိုလ်) သည် အနှစ်အသားပေတည်း။ ဤမပျက်စီးနိုင်သောစိတ်လွတ်မြောက်မှု (အရဟတ္တဖိုလ်) သည် အဆုံး (ပန်းတိုင်) ပေတည်းဟု ဤတရားကို မြတ်စွာဘုရားသည်ဟောကြားတော်မူ၏။”
“Như vậy, này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này các Tỷ-kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh.”
Posted in Monasticism	| Tagged bhikkhu, bhikkhuni, dhamma